Mararka qaarkood waxay u baahan yihiin in aad sawiro ka phone wareejiyo si aad u computer. Dadka intooda badan ayaa taas samayn doonta si ay sawiro ay ka soo gaartay dhici kara haddii ay dhacdo in ay lumiyaan taleefannadooda ilaaliyo. Xaaladaha intooda badan si aad u computer wareejinta sawiro aad dhib kuma aha. Fudayd ayaa waxaa ku jiraa waxa weeye si kastaba ha ahaatee ku tiirsan tahay aalad aad u isticmaalaan si ay kaaga caawiyaan in aad tan u sameeyaan.
Qaybta 1. Sida loo sawiro ka iPhone wareejiyo si aad u computer
Si ka iPhone wareejiyo sawiro aad u your computer si fudud, waxaad u baahan doontaa in software in tani samayn kartaa mid ka mid fudud click. Mid ka mid ah ugu wanaagsan ee Suuqa waa Gurtida GO Wondershare.
Software Tani ma ogolaan karaa oo kaliya in aad sawiro ka iPhone wareejiyo si aad u computer, sidoo kale waa qabanqaabiyaha music kama dambaysta ah iyo sidoo kale kaa caawin karaan inaad abaabulo playlists aad. Waxaa kale oo aad u anfacaya marka aad rabto in aad ku nadiifisid maktabadda sawir aad iyo aad uga takhalusi tus.
Halkan sida loo isticmaalo TunesGO Wondershare in si aad u computer wareejiyo sawiradaada.
Talaabada 1: Download iyo rakib TunesGo si aad u computer
Download version of Wondershare TunesGo waa la jaan qaada OS habka iyo ordi barnaamijka.
Talaabada 2: Isku aad iPhone si aad u computer
Waxaad ku xidhi kartaa iPhone in your computer iyadoo la isticmaalayo fiilooyinka USB iyo abuurtaan kala iibsiga macruufka ah. Software waxay aqoonsan doonaa qalab macruufka ah oo ay muujiyaan in uu furmo suuqa hoose garab dhammaan faylasha ku saabsan iPhone.
Talaabada 3: dejinta aad Photos ka iPhone si aad Computer
Waxaad arki doontaa in ay jirto file la odhan jiray Photos ee suuqa kala hoose. Guji file this in la furo oo dhan albums ku saabsan iPhone. Waa in aad iPhone muujiyaan sawirka Library iyo kitaabkii duudduubnaa Camera ah. Maktabadda sawir waa sawiro aad synced in qalabka ka Lugood, Kitaabkii duudduubnaa oo camera ee ku jira sawirada aad qaaday iyadoo la isticmaalayo qalab. Dooro sawiro aad rabto inaad ka dhoofin dooran meel on your computer oo aad sugto nidaamka si uu u dhameystiro.
Taasi fudud aad haysatid oo dhanba sawiro aad wareejiyo your computer.
Qaybta 2. Sida loo sawiro ka Android wareejiyo Computer
Koobiyo ama sawiro ka qalab Android aad wareejinta waa si caddaalad ah u fududahay. Just raac tallaabooyinkan oo waa in aad haysatid oo dhanba aad sawiro on your computer waqti at dhan.
Talaabada 1: Isku aad Device isticmaalaya cable USB si aad u computer. Waa in aad USB icon ah ka muuqan "farriimaha" degaanka ee telefoonka.
Talaabada 2: aad telefoon, hoos u jiid aagga farriimaha ka dibna garaac wargelinta. Tubada Nest on "USB Connected" ka dibna on "Buur."
Talaabada 3: On your computer. Riix badhanka ku bilaabatay ka dibna My Computer. Qalab Your waa in loo aqoonsadaa saari digsi. Laga soo bilaabo halkan click double on disk ka saari karo si aad u furto. Riix DCIM ka dibna gal Camera ah
Talaabada 4: Waxaad markaas aad nuqulka karaan dhammaan sawiro ku gal si aad u computer
Si aad barkinta qalabka, kaliya u tag aagga farriimaha telefoonka mar kale iyo garaac calaamad USB ah.
Qaybta 3. Sida loo Photos ka Nokia wareejiyo Computer
Kala beddelashada sawiro aad ka Nokia si aad u computer ma u leeyihiin in ay adag tahay. Raac tallaabooyinkan fudud si hannaanka looga dhigo mid wax badan ka sahlan.
Talaabada 1: Isku aad telefoon si aad u computer. Waxaad taas samayn kartaa mid ka mid isticmaalaya fiilooyinka USB ah Bluetooth. Xiriir USB waa fududdahay.
Talaabada 2: Waxaad u baahan doontaa in aan bilowno PC Suite Nokia ah. Haddii aadan haysan version desktop ee Nokia PC Suite ah, waxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo iyo rakibi waxaa. Marka waxa la rakibo, abuurtaan software on desktop.
Talaabada 3: wareejin Photos. Riix icon Golaha file ku saabsan Suite PC. Markaas suuqa kala dhashay, guji Memory Phone ah, gudaha waxaad ka heli doontaa dhammaan faylasha ku saabsan telefoonka Nokia. Dooro faylka photos; dooran folder caga on your computer iyo kala iibsiga ah.
Qaybta 4. Sidee si ay u gudbiyaan sawiro ka BlackBerry in Computer
Mid ka mid ah siyaabaha ay u sawiro ka Blackberry wareejiyo si aad u computer ka mid ah kubad sahlan waa in ay isticmaalaan xargo USB. Waxaad u baahan doontaa oo keliya cable USB iyo Software maareeyaha BlackBerry Desktop Timid telefoon kasta BlackBerry.
Tallaabo 1: Ku rakib Manager BlackBerry ee Software haddii aadan hore iyo xirmaan aad telefoon si aad u computer isticmaalaya fiilooyinka USB.
Talaabada 2: Dooro warbaahinta on Manager Blackberry ah Software oo ka furmo suuqa sababtay dooro faylasha aad rabto in lagu wareejiyo.
Talaabada 3: Si fudud u dooro sawirada aad jeclaan lahayd in ay u gudbiyaan in aragtida hoose ka yar Qalabka iyo kuwaa oo si folder sawirada aragtida ugu sareeya. Taasi fudud, aad wareejin sawiro aad u your computer ka Device ah Blackberry.
> Resource > Transfer > Sidee si ay u gudbiyaan Photos ka Phone si aad Computer